युवाहरूका लागि ग्रुमिङ रुल्स - लाइफ स्टाइल - साप्ताहिक
युवाहरूका लागि ग्रुमिङ रुल्स
- रोजिन शाक्य
आश्विन १३, २०७५
आफ्नो स्किन टाइप बुझौं
प्राय: पुरुषलाई आफ्नो छाला कुन प्रकारको छ, थाहा हुँदैन, जसका कारण उनीहरू तैलीय छालामा मोइस्चराइजिङ क्रिम अनि ड्राइ स्किनमा ओयल फ्रि क्रिम प्रयोग गर्छन् । यो समस्याबाट जोगिन एउटा टिस्यु पेपरलाई आफ्नो मुहारमा राखेर छालाको जाँच गर्नुपर्छ । यसबाट आफ्नो छाला तैलीय छ कि छैन पत्ता लाग्छ । यदि ओयलका साथमा डस्ट पार्टिकल्स पनि छ भने छाला तैलीय छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
दैनिक क्लिन्जिङ गर्नाले छाला चम्किलो एवं कोमल हुन्छ । छालाको प्रकारअनुसार क्लिजिङ प्रयोग गर्दा मुहारको रोमछिद्रमा भरिएको धूलोमैलो निस्कन्छ र अनुहार दागरहित हुन्छ ।
सेविङ वा ट्रिमिङ
यसबाट मुहारको मैलो सफा हुन्छ । सेविङका लागि हार्ड ब्लेड प्रयोग गर्नु हुँदैन । यदि हेवी विचर्ड राख्न चाहनुहुन्न वा आफ्नो ज–लाइन सार्प छ भने स्टबल बियर्ड राखेर लुकलाई आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यदि ज–लाइन सार्प छैन भने चिउँडोमुनिको केश सफा गरी पेच स्टाइल अपनाउन सकिन्छ ।
अनुहारको छालाको नरमपन कायम राख्न जरुरी छ, कारण जब छाला सुख्खा हुन्छ तब त्यो फुट्न थाल्छ । यसबाट छाला कस्सिन्छ । यस्तो अवस्थामा मोइस्चराइजर प्रयोग गरी आफ्नो छालालाई कोमल राख्न सकिन्छ ।
मुहारबाट छालाका मृत कोषहरू हटाउन एक्सफोलिएट गर्नु आवश्यक छ । धूलोमैलो र तैलीय पदार्थ छालाको बाहिरी भागमा जम्मा हुन्छ र ब्ल्याक तथा ह्वाइट हेड्स मौलाउँछ । यसलाई एक्सफोलिएसनका माध्यमबाट हटाउन सकिन्छ । यो उपाय सातामा दुई पटक अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
उपयुक्त साबुन छनोट
धूलो एवं प्रदूषणको जति बढी सामना गरिन्छ । साबुन छनौट गर्दा त्यति नै सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो छालाअनुरूपकै साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ । ओयली स्किनका लागि फ्रुट वा जेल बेस्ड
साबुन तथा ड्राइ स्किनका लागि क्रिम बेस्ड साबुन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
घामको प्रभावबाट जोगिन सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्छ । एसपीएफ ३० युक्त सनस्क्रिन छालालाई घामबाट जोगाउन प्रभावकारी हुन्छ ।
मुखबाट आउने दुर्गन्धका लागि दाँतको फोहोर पनि जिम्मेवार हुन्छ । टुथब्रसलाई हरेक तीन महिनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ब्रस गर्दा जिब्रो पनि सफा गर्नुपर्छ । माउथवास भने दिनहुँ प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
नङ राखौं सफा
नङलाई सफा एवं ट्रिम राख्नुपर्छ । यदि नङ कडा छ भने केही समय पानीमा भिजाए त्यो नरम हुन्छ । भिजेको नङ काट्न सजिलो हुन्छ ।
महिलाको तुलनामा पुरुषको शरीरमा बढी रौं हुन्छ, जसले गर्दा पसिना पनि बढी आउँछ । राम्रो खालको परफ्युम, डिओ बडी स्प्रे तथा टेलकम पाउडर प्रयोग गरी शरीरको दुर्गन्धबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
स्वयंलाई आकर्षक बनाऔं
आईब्रोज हेभी र बाक्लो छ भने सैलुनमा गएर त्यसलाई ट्रिम गर्नुपर्छ । यसलाई राम्रो खालको ट्रिमरले आफंैले पनि सेट गर्न सकिन्छ । ट्रिमरबाट नाक र कान दुवै स्थानका रौंलाई सहजै सफा गर्न सकिन्छ । प्लकरका मद्दतले ब्रोजको आइवन रौं वा अतिरिक्त रौंलाई प्लक गर्न सकिन्छ ।
केश छोटो राख्न हरेक २–३ सातामा त्यसलाई ट्रिम गराउनुपर्छ । गर्दनपछाडि आउने लामो रौं सेब गर्नुपर्छ ।
केश नियमित रूपमा सफा गर्नुपर्छ । ड्राइ हेयर छ भने एकदिन बिराएर धुन सकिन्छ । आफ्नो केशको टेक्सचरअनुसार राम्रो खालको स्याम्पु तथा कन्डिसनर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
केशलाई स्टाइल प्रदान गर्न हेयर सिरम प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग भिजेको केशमा गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक केशमा हेयर क्रिम वा मुस आदिसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले केश शाइनी देखाउनुका साथै त्यसलाई सेटसमेत गर्छ ।
केश लामो छ भने पोनी स्टाइल अपनाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक बज कट अर्को राम्रो विकल्प हो ।
जसको केश खुइलिन थालेको छ, जसको केश कम छ उनीहरूका लागि सैग, सर्ट, स्पाइकी तथा क्रु कट उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित :आश्विन १३, २०७५
स्क्रिप्ट लेखनका लागि कार्यशाला
पदयात्राका लागि खुम्बुका गन्तव्य
मानविय सहायताको लागि ‘भुपू साँझ’
प्रेम गीत ३ : की अभिनेत्रीको लागि अडिसन सुरु
सुरक्षित पासवर्डका लागि
२०७६ का लागि तपाईंको ठोस योजना के छ ?
लाइफ स्टाइलबाट अरु
लोकतन्त्रकलीसँग उग्र ध्रुबे फाल्गुन २२, २०७५
दुई हाइ प्रोफाइल विवाह असार २५, २०७५
मधुमेहले उत्तेजनामा समस्या हुनसक्छ फाल्गुन ३०, २०७४
बस्ती होइन सहर नै बसाउँदै धुर्मुस–सुन्तली माघ १६, २०७४
चलचित्र नै मेरा सन्तान हुन् भाद्र २७, २०७१
सर्पका सारथि भाद्र २०, २०७१
प्रहरी कि साहित्यकार ? भाद्र १३, २०७१
नर्स बन्ने रहर पूरा भएन भाद्र ६, २०७१
सौम्य सञ्चिता श्रावण ३०, २०७१
शिवहरिको शैली श्रावण २३, २०७१